Iingqapheli ezili-10 eziqhelanisiweyo ezaba yiClassical - Amarekhodi ama-Indie alahlekile aguquke
U-Brian Eno unokuthi mhlawumbi mhlawumbi wathi: "I-albhamu yokuqala yeVelvet Underground yathengisa iikopi ezili-10 000, kodwa wonke umntu oyithengayo yakha ibhendi." Ukucaphuna kwavela ngokugqithiseleyo, ekuthatheni ubunzima beVelvet Underground obubonakalisa njengefuthe njengamaBeatles, nangona bekungakaze kube nantoni na efana noYudas, vumela uYesu. Nangona kunjalo, oko kwakubonakala kwakunjalo ngokukhethekileyo kwi-VU kungekudala kuye kwaba yinto ebanzi, kunye nama-albhamu angabonakaliyo akhula kwimisebenzi emininzi emva kokuba abenzi babo baqhekeza, bathathe umhlala-phantsi, balala, okanye bafa. Ngoku, i-VU isango-i-10,000 ikopi-ibonakala ithandwayo kakhulu: ezi ngxelo ezingenakunqwenela umphefumlo uthenge ekukhululweni kwawo kokuqala.
Alexander "Yeka" i-Spence 'Oar' (1969)
UAlexander "Yeka" iSpence 'Oar' (1969). Columbia
Emva kokukhululwa kwayo ngo-1969, i-albhamu enye kunye neyeyodwa kwi-psychedelic burnout Skip Spence yafumana ukuhlaselwa ngokukhawuleza, ibe yi-albhamu esithengisa kakhulu i-Columbia Records eyayikhupha. I-Spence yayingumntu ongenalo ukunyaniseka, ekhishwe kwi-Moby Grape yokuzama ukuhlasela ibhinqa likaJerry Miller ngesigxina (ekholelwa ukuba wayenayo uSathana), kwaye ichitha inyanga ezintandathu e-ward ye-Bellevue yengqondo. Ephethe i-albhamu yakhe, udlale zonke izixhobo ngokwakhe, udibanisa iqoqo leemifanekiso ezisiqingatha; idemo ezukisayo apho isakhiwo somculo esiyingqungquthela siya kufa. Sekunjalo, ngokungazelelwe, kwandiswe ngobunzima ngexesha elide, ekugqibeleni kubalwa u-Beck, uWilco, u-Tom Waits, isanti esininzi, kunye noRobert Plant phakathi kwabo banqula ubunqamle bodwa.
Ihlabathi lika-Arthur Russell ye-Echo '(1986)
Ihlabathi lika-Arthur Russell ye-Echo '(1986). Rhwebi
I-Cello prodigy yajika umqambi we-avant-garde waphendukela umvelisi we-disco, u-Arthur Russell wayengenasiphelo esingapheliyo, esebenza ngokungapheliyo kumxube ongenakubalwa weengoma zonke. Uninzi lwawo, akazange akhiphe ukukhululwa. Omnye wayecinga ukuba i-albhamu yakhe edumileyo, ngoko, yayiza kuba yindawo yokuphelela ukulungelelanisa, umsebenzi omkhulu wokuthanda ukuhamba ngokucwangcisa ukulungelelanisa i-orchistral amalungiselelo kunye nokuveliswa okuqhelekileyo. Endaweni yoko, i- World of Echo yintetho engapheliyo, iqoqo leengoma ezikhethiweyo apho uRussell esicacisa i-cello yakhe, enezela ilizwi lokulila kunye ne-electronics, kwaye uvuselela into yonke, ukulibazisa, kunye ne-tape-hiss. I-LP yayingenaso ibhilikhi ekukhululweni kwayo, kodwa uRussell wayeza kuqondwa njengemifanekiso ye-indian;
UBill Fay 'Ixesha lokutshutshiswa' (1971)
UBill Fay 'Ixesha lokutshutshiswa' (1971). Deram
Kwi-self-titled 1970 yakhe yokuqala, uBill Fay wadlala njenge-Bob Dylan acolyte ekholisayo: yonke ingoma yengqiqo kunye nomlingo-umntu. Nantoni na eyenzekayo kwithuba lonyaka, i-Fay ka-1971 Ixesha loThutshiso lokugqibela lunqamle into ehluke ngokupheleleyo. UFay ngokukhawuleza wakhupha amehlo kwaye wakhupha, walala phakathi kwe-'60s paranoia njengoko ephethe phezu kweqela leentlanga ezixakekayo ezixhalabileyo eBhayibhileni. Apha, uhlabelela ukufika kweeNtsuku zokuQala, ukuqhafaza kwi-track-track lapho i-free-jazz freakout imema ngokukhawuleza ukuhlwithwa. I-albhamu yanyamalala ingabikho, kwaye kunjalo noFay. Sekunjalo, emva kokuba i-albhamu yakhe ilandelwe nguWilco, uMonakalo, uMlambo we-Okkervil, kunye neNick Cave, ekugqibeleni uFay waphinde wabuyiselwa kwi studio emva kweminyaka engama-40.
Umxube weDolly 'Iimpawu zokubonisa' (1983)
Umxube weDolly 'Iimpawu zokubonisa' (1983). Abafayo abaDolly Platters
Ingxube yeDolly yasungulwa ngowe-1978 kunye neenkcukacha ze-punk -bungekho buchule bomculo kuzo zonke-kodwa kungekhona iimpembelelo ze-punk. Iinjongo ze-trio zaseLondon kwakuyikukhupha amaqela-ntombazana yee-1960 kunye nokubhala iingoma eziphambili ze-pop. Ngenxa yokwala kwabo ukugwala (kunye nobulili babo), uMxube weDolly wabingelwa ngobutshaba ngaphezu kokuthanda kwiminyaka emihlanu kunye. Ngowe-1983, ukuqonda ukuba isiphelo siseduze, bahamba ngebhodi ye "albhamu efanelekileyo": ukunyanzela i-demos kwi-LP kabini, ukuyikhupha nge-white label artwork, ize iphule emva kokukhululwa kwayo. Baya kuthi bahanjiswe ukuba bangaziwayo ukuba kungengenxa yokuba iifowuni zabo zokubonakalisa zisebenza njengeproto- tee: zonke i-harm-part parts, i-jangle guitar, kunye ne-sound sound.
Iprojekthi ye-Music School yaseLangley 'Ukungabi Namahloni Nokuphazamiseka' (2001)
Iprojekthi yeMculo yesikolo saseLangley 'Ukungabi namacala kunye nokuphelelwa lithemba'. Ibha / Akukho
Ngowe-1976, utitshala womculo waseBrithani Columbia ogama lakhe linguHans Fenger waqala ukwenza ukuqoshwa kweqela labafundi besikolo abacula i-Beach Boys, iBeatles, uBuyie et al kwisikolo sokuzivocavoca esikolweni. Ukunyamezela abahlobo kunye nosapho, ukurekhodwa-enye ukusuka ngo-1976, enye ukususela ngowe-1977-yahlala ingabonakali kwaze kwafunyaniswa kwi-garage edayiswa ngonyaka ka-2000. Ukukhishwa konyaka kamva, ukurekhoda ubugorha oboniswa ngethuba lexesha-yaba yinto ebalulekileyo, kunye nomhlaba omtsha obalaseleyo obalawuli be-indie. Kwaye ngokukhawuleza baba nefuthe: uKaren O apho Izinto zezilwanyana ziyi- soundtrack kunye neprojekthi yeRans Gosling ye-Dead Man's Bones ngokuqinisekileyo ekukhulekeleni kwi- Innocent and Outlook altar.
I-Monks 'Black Monk Time' (1965)
Isikhathi seMonks 'Black Monk' (1965). Polydor
Eyenziwe ngo-1964 ngabasebenzi be-American GIs abahlala eNtshona Jamani, abaMonki babethandwa ngabantu abaninzi ababezibona. Ukusebenza kwi-manifesto ebhaliwe ngabaphathi babo -bambini be-Situationist-minded, i-German gurus-ibhendi yaba yinto yokuphendulela, i-anti-Beatles 'esebenzayo yabuqhawula, i-rock'n'roll enesibindi njengesixhobo. Le ngcamango yokulwa nayo yaboniswa ngumgca wambatho: amalungu onke agqoke kwiimfono ezimnyama, kunye neentsimbi ezicotyiweyo ezintloko zabo, kunye ne-nooses ziboshwe entanyeni. Ngaphandle kokuthetha, baqhekeka emva kwe-albhamu enye, kodwa ukuphindaphinda kwexesha leMonk yaseMnyama kubonakalise ukuba nefuthe elihle kwisizukulwana esilandelayo somculo waseJamani-ukunyakaza kwe- krautrock- kunye neendlela zonke ze-punks emva koko.
Nick Drake 'Pink Moon' (1972). Siqithi
I-Pink Moon- kunye ne-hero-tortured anti-hero, uNick Drake- yinkalo eyaziwayo kakhulu kwi-posthumous exhumation, i-reappraisal ebalulekileyo kunye nokungafi komculo ongalindelekanga. I-LP yokugqibela ye-folki yokuzibulala yanyuka ngo-1972 ukukhululwa kwayo, ngokuyininzi ngenxa yokulungiswa kwayo okubuhlungu kunye nosizi olungapheliyo, kodwa kunzima ukukunqandwa ngumlobi walo ukuba angabonisana nodliwano-ndlebe okanye uhambo. Kancinci, umjikelo wawuya kujika. I-Pink Moon yakhula yaba yintando yamaqhawe ngo-'80s 'no-90, ekugqibeleni iqhuma ngo-1999 xa yenziwa inkwenkwezi ye-Volkswagen yorhwebo. Emva koko, uDrake waba ngumgcini wongcongconi weentlanzi zentlanzi kunye neendawo zokulala ezigulana kwiindawo zokulala, nakwiindawo ze-UK e-2004, iminyaka engama-30 emva kokufa kwakhe.
I-United States yaseMelika 'iUnited States of America' (1968)
I-United States yaseMelika 'iUnited States of America' (1968). Columbia
Xa i-United States yaseMerika ikhuphele i-albhamu yayo kuphela ngo-1968, ayizange ifumane i-push ye-label yayo, Columbia. "Kwakukho," umongameli waseA.SA u-Joseph Byrd uthi, "inzondelelo enkulu evela kubaphathi bebhendi egama labo belizondayo, nomculo wabo abangawuqondiyo, kunye nezopolitiko ababecinga ngazo." Ingubo yaseSan Francisco yayinabantu abafundiswayo ngabanamhlanje abango-John Cage kunye noKarlheinz Stockhausen, ababecinga ukuba basebenzise i-avant-garde zabo-iziganeko ezingabonakaliyo, ukulungelelanisa imodyuli, i-violon-offon-scrape Nangona bafumana abambalwa abalandeli ngelo xesha, kwi-90 yama-USA aphefumlela ama-pop amaqela angama-pop adventure aseNgilani: ayenconywa ngobukhulu bawo ngo-Portishead, Broadcast , kunye neStereolab.
UVashti Bunyan 'Olunye Usuku Lwedayimane' (1970)
UVashti Bunyan 'Olunye Usuku Lwedayimane' (1970). Spinney
Xa i-albhamu yokuqala yeVashti Bunyan, i- Just Another Diamond Day yakhululwa ngowe-1970, yaqhuma ibhomu. Ziziphi ezimbalwa ukuhlaziywa kwazo ezihlekisiwe iirekhodi ze-hippy dippy idealism, kwaye yayingakwazi ukuthengisa iikopi eziyi-100. Ukubonelelwa ukuba i-LP yayingumntu wedwa-iingoma ezichaza amava kaBunyan ehambahambayo, kunye nendoda, izinja, kunye nehashe kunye neenqwelo eziya kwidolophu yaseScotland- umculi wazithatha: akazange aphume kuphela kumculo, kodwa akazange akwazi ukucula ukujikeleza indlu emva kweminyaka emininzi emva koko. Kodwa, ngaphezu kwexesha, elinye i-Day Diamond Day yaba ngumbonakalo oyingcwele kubaqokeleli be-LP, kwaye emva kokuphindaphinda kwe-2000, i-albhamu yamukelwa njengeklasi elahlekileyo.
Ulutsha lweMarble Young 'Colossal Youth' (1980)
I-Young Marble 'Colossal Youth' (1980). Spinney
I-Welsh post-punk minimalists i-Young Marble Giantes yashiya emva kwe-discography encinane. U- Youth 's Colossal Youth- 1980 owathatha ngokufanelekileyo amathambo angathatywanga amacandelo, i-bass, i-drum-machine, kunye ne-Alison Statison-vocals-yabo ye-longplayer yodwa. Ukuba iqela laphuka ngokukhawuleza emva kokukhululwa kwayo kwanika i- Colossal Youth ukuba ibuyele kwakhona; irekhodi lokuthengisa iikopi ezininzi kwiRhwebi leRough. Kodwa, ngokukhawuleza, impembelelo yayo yavezwa, kunye ne-Trainey Thorn yoLwandle lwaBamantombazana abenza njengama-acolytes aneminyaka eyi-17 ubudala. Kule minyaka, i-Young Marble Giant izandi ziza kukhula ngokukhawuleza zibe yi-indie-classical status, ubuninzi bezandi ezikhankanywe ngokuphindaphindiweyo njengempembelelo kumaqela kunye nabavelisi bobabini.
Iingoma ezi-10 eziphezulu zeNYNNC
Uninzi lwabaculi beMculo boLuntu
Ukuqonda Ulwabiwo lweMemori eDelphi
Umoya weMimoya kunye neNkcubeko
I-18-Hole Score Score Ikho
Izizathu Zokuba Kutheni Inqwelo Yakho Idlulele
Biography kaRobert G. Ingersoll
Impembelelo Neurons kunye neMisongo
Ngaba Ndinokudibanisa Amanzi Adibeneyo Amanzi Ngemibala Yeoli?